कोरोनाले बालबालिकामा पारेको असर अनि युवाको भुमिका - Nepal Niti
-पुजा भुषाल, प्युठान
प्युठान जिल्लामा कोरोना संक्रमित बालबालिकाहरु ५६ जना रहेका छन् । ती मध्ये ५४ जना निको भएर घर फर्किसकेको र २ जना उपचारार्थ रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानले जनाएको छ । हाल विश्वभरमै फैलिरहेको कोरोना भाइरसले अनाथ, असहाय, अपाङ्ग लगायत अन्य बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा पनि यसले असर पारिहेको हामीहरुलाई अवगत नै छ । हरेक बालबालिकाहरुले औपचारिक रुपमा विद्यालयमा उपस्थित भएर पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन् । देशमा रहेका सामुदायिक, निजी विद्यालयहरु तथा क्यापसहरुमा क्वारेन्टाइन बनाईएको छ । फलस्वरुप पठनपाठनको मुख्य ढोका नै बन्द भएको छ । शिक्षक र विद्यार्थी एकअर्काका पूरक हुन । औपचारिक पठनपाठन नहुदाँ बालबालिकाहरुको पढाइ प्रति रुचि घट्दै गएको छ । नेपालसरकारबाटै विद्यालयमा पठनपाठन नगर्न निर्देशन जारी गरिएको छ । बालबालिकाहरुले शिक्षालाई दिदै आएको पहिलो प्राथमिकता आफ्नो मानसपटलबाट नै खस्किदै गएको बताउछन् । कोरोना भाइरसको स्थिती एकदमै भयानक बन्दै गएकाले यसको सन्त्रासले बालबालिकाहको मनस्थिती मै नराम्रो पर्न गएको छ । जसले गर्दा उनिहरुको मनस्थिती ठीक छैन । शिक्षा पछि अर्को संवेदनशील क्षेत्र स्वास्थ्य हो । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य कर्र्मीहरुले बालबालिकाहरु बिरामी भएको खण्डमा उपचारमा खटिन आनकानी गरिरहेको अवस्था छ । जसले बालबालिकाहरुमा दीर्घकालीन रोग नित्याउनुका साथै मृत्युको मुखमा पुर्याउन थालिसकेको छ । नेपाल जस्तो अल्प विकसित राष्ट्रमा बालबालिकालाई संवेदनशील रुपमा हेरिन छोड्यो भने राष्ट्रले ठुलो घाटा बेहोर्नु पर्ने सत्यलाई वेवास्ता गरिदै छ । राष्ट्रले विकासको तीव्र्रता लिन सकिरहेको छैन । फलस्वरुप राष्ट्रले विकासको गतिलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । वेलावेलामा देशको उच्च पदमा रहिरहेको व्यक्तिहरुले नै कोरोना भाईरस हाउगुजी जस्तै गरेर प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । यसलाई विभिन्न मिडियाहरुले अझ नराम्रो तबरले समाचार कभर गरेर प्राचरप्रसार गरिरहेका छन । भनिन्छ ‘बालबालिका काँचो माटो हुन’ , जुन तवरले हामीले सिर्जना गर्छौं त्यहि नै उनीहरुको भविष्यको वास्तविक रुप बन्न पुग्छ । त्यसैले यस्तो संवेदनशील उमेरका हरेक बालबालिकालाई ध्यान नदिएर त्रासको रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेका मिडियाहरुलाई सेन्सरको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । लकडाउन खुल्दा दोस्रो दिनमै घरी परीक्षा सञ्चालनको रुटिङ प्रकासन गर्ने, घरी रद्द गर्ने र घरी लकडाउन गर्ने सिस्टम नै बसालिरहेका छन्, हाम्रो नेपालमा । किन बालबालिकाहरुलाई नजर अन्दाज गरिरहेका छन त ? उनीहरु बालबालिकाहरुको भविष्यमाथि कत्तिपनि चिन्तित नभएकै हो त ?
भनिन्छ, युवा समस्याका समाधानका स्रोत हुन । हरेक समस्या पहिचान गरी समाधानका विकल्प खोज्ने व्यक्तिहरु नै युवा हुन । एउटा युवाकाक्े देशका हरेक क्षेत्रमा सञ्चालन भैरहेका कार्यहरुलाई पारदर्शी बनाउन दबाब दिने, ध्यानाकर्षण गराउने जिम्मेवारी पनि हुन्छ । जसरी अहिले हरेक विद्यालयहरुमा क्वारेन्टाइन बनाई पठनपाठनमा रोक लगाइएको छ । बालबालिकाहरुका अधिकारहरुको मध्यनजर गर्दै विद्यालय तथा क्याम्पसहरुलाई क्वारेन्टाइन स्थलको रुपमा प्रयोग नगरी सामान्य भौतिक दुरी कायम गर्ने गरी पठनपाठन सन्चालन गर्ने । साथै सरकारले यस अवस्थामा बिद्यालयहरु खुलाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । समुदायस्तरमा धेरै सक्रमण भएको अवस्थामा पठनपाठनको माध्यम विद्यालय बन्द गरेतापनि दूर शिक्षा र प्रविधि अङ्गाल्नुपर्छ । विद्युत प्राप्त ठाउँहरुमा भर्चुअल माध्यमबाट अनलाइनमा पठनपाठन गराउनु पर्छ भन्ने बारेमा युवाले सरकारलाई दवाव दिनुपर्छ । अझ अनाथ बालबालिकाहरुको अभिभावकत्व भुमकिा निर्वाह गर्ने कोही हुदैनन् । असहायहरुलाई साहारा दिने कोही हुदैनन् भने अपाङ्गको हौसला बढाउने कोही हुदैनन् । जसले गर्दा उनिहरुममा खिन्नता बोध बढ्दै गएको छ । उनिहरुलाई असल बाटो पहिल्याउन युवाहरुले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । उनिहरु पनि समाजका अन्य व्यत्ति सरह नै हुन् भनेर युवाहरुले अनाथ , अपाङ्ग र असहाय बालबालिकाको हकमा उनीहरुको क्षमता अनुसारको शिक्षा प्रणालीलाई लागू हुनेगरी, उनीहरुलाई सोही अनुसारको शिक्षा प्राप्तिमा सहयोग र हौसला प्रदान गर्न सरकारका तीनै तहलाई ध्यानकर्षण गराउनु पर्छ । जसरी हरेक क्षेत्रबाट त्रास सिर्जना गर्ने, बालबालिकाको मन मस्तिस्कमा चोट पु¥याउने जस्ता कार्य भइरहेका छन् । यसलाई बन्द गराउन विभिन्न तरिका अबलम्बन गरेर सम्बन्धित निकायमा आवाज पुर्याउने कार्य युवाहरुले गर्नुपर्छ । युवाहरुले आफ्ना छोराछोरीको शिक्षाप्रति चिन्तित अभिभावकहरुलाई उहाँहरुको सकृयता बढाइ बालबालिकाहरुको पठनपाठनका कार्य सम्पादन गर्न जिम्मेवारी दिनुका साथै सान्त्वना दिनुपर्दछ । युवाहरुले पढाइ सञ्चालन गर्नका लागि उठाएका कदमहरुपनि प्रति अभिभावकको पनि साथ सहयोग हुने वातावरणको र्सिजना गर्नुपर्दछ ।
बाल वचाउ , बाल संरक्षण , बाल विकास र अर्थपुर्ण बाल सहभागीता जस्ता बालबालिकाहरुको अधिकार कार्यान्वयन गराउनमा युवाहरुले योजनावद्ध व्यवस्था गर्न जरुरी छ । आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई आत्मसात गर्दै हामी युवाहरु मर्यादित, अनुशासित , सु.ं सस्कृत , चिन्तनशील ,र्सिजनशील , अध्यनशील भूमिकामा रही सामाजिक रुपान्तरणको संवाहकको रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ । त्यसैले विद्यालयका शैक्षिक सामाग्री , फर्निचर , विज्ञान तथा कम्युटर प्रयोगशालाहरु जीर्ण र विनाश रोक्नलाई जोखिम मोलेर भएपनी सक्रिय हुनुपर्दछ । साथै यसको सुरक्षाका निम्ति प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रमा सूुचनाहरु सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ ।